Chelsea Oo Dalab Rasmi Ah Ka Gudbisay Kai Havertz & Bayer Leverkusen Oo Jawaab Degdeg Ka Bixisay - Gool24.Net
Chelsea Oo Dalab Rasmi Ah Ka Gudbisay Kai Havertz & Bayer Leverkusen Oo Jawaab Degdeg Ka Bixisay
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay xiddiga khadka dhexe ee da’da yar ee reer Germany ee Kai Havertz, kaas oo la sheegay inay hore ula gaadhay heshiis shaqsi ah.
Blues ayaa bartilmaameed ka dhigatay Kai Havertz markii ay ku guuleysatay saxeexyada Timo Werner iyo Hakim Ziyech, waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey soo baxayay warar ay ku diirsanayeen taageereyaasha Chelsea oo tibaaxayay in heshiiska shaqsi ah ay laacibkan la gaadhay, kaliyana ay hadhsan yihiin in la dhamaystiro wada-xaajoodka labada kooxood u socday.
Tababare Frank Lampard oo xili ciyaareedkii hore hoggaamiyey Chelsea oo aan samaynin saxeexyo cusub maadaama suuqu ka xidhnaa, waxa si fiican u adeeganayaa xagaagan, waxaana marka laga yimaaddo Kai Havertz uu doonayaa in Stamford Bridge ay yimaaddaan Nick Pope, Decaln Rice iyo Ben Chilwell.
Laakiin waxa liiskan ugu horreeya kubbad-sameeyaha reer Germany ee Kai Havertz, kaas oo ay kooxdu ka gudbisay dalab rasmi ah, waxaana kalsoonida ugu badan uu Lampard helay markii ay Leverkusen ka hadhay Champions League xili ciyaareedka dambe, kaas oo ah tartan ku weyn maskaxda 21 jirkan oo uu doonayo inuu ka ciyaaro.
Si kastaba, dalab rasmi ah oo ay Chelsea ka gudbisay Havertz ayaa jawaab degdeg ahi markiiba uga soo noqotay, waxaanay Bayer Leverkusen soo diidday dalabkaas.
Sida uu qoray wargeyska caanka ka ah Jarmalka ee Bild, Bayer Leverkusen ayaa u sheegtay Chelsea in aanay dalabkooda aqbalayn, wada hadal toos ahna aanu u bilaabmayn illaa inta laga gaadhayo August 21 markaas oo ah maalmo kaddib xilliga uu soo dhamaanayo tartanka Europa League oo ay kooxdu la ciyaari doono Rangers.
Tallaabadan ayaa ka dhigan in Chelsea ay sugi doonto inay hesho Kai Havertz ilaa dhamaadka bisha dambe xilli uu dhow yahay bilowga fasal ciyaareedka dambe.